प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई प्रश्न- तपाईंहरूले किन ओलीको साथ छोड्नुभयो? :: सन्जिब बगाले :: Setopati
एमाले सांसदहरू किसान श्रेष्ठ र प्रेमबहादुर आले।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषदका चर्चित मन्त्री हुन्- प्रेमबहादुर आले।
२०७४ को आम निर्वाचनमा डोटी-१ बाट निर्वाचित भएका आलेलाई ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गत पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएका थिए।
वन मन्त्री हुँदा आलेले कुनै उल्लेखनीय कामचाहिँ गरेनन् तर उल्टोपाल्टो भाषणले उनी निकै चर्चामा आए। उनका मिम र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने।
पछिल्लो समय उनले केही अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नो तस्बिरसहितको पोस्टर टाँसेर डोटी र धनगढीका अस्पतालमा बाँडेका थिए।
यी चर्चित मन्त्रीलाई ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हटाइदिए।
ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनका सारथी बन्न गएका सांसद आले आइतबार भने ओलीसँग थिएनन्। आइतबार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुअघि बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक (माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित)ले प्रधानमन्त्री देउवाका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि संवाददातासँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले देउवाका पक्षमा मत दिनेहरू एमालेमा नरहने बताएका थिए।
आलेले उक्त बैठकको निर्णय उल्लंघन गरिदिए। आइतबार राति भएको मतदानमा उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदसँगै 'फ्लोर क्रस' गरे र देउवाका पक्षमा विश्वासको मत दिए। उनीसँगै ओली पक्षका अरू ८ सांसदले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिए।
सोमबार बिहान सेतोपाटीले सांसद आलेलाई तपाईंले किन ओलीको साथ छोड्नु भयो भनेर सोधेको थियो।
जवाफमा आलेले यसबारे आफूले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए।
‘म अहिले यसबारेमा केही बोल्दिनँ। दुई-चार दिनपछि भन्छु,’ उनले भने।
आलेले मुखै खोलेर नभने पनि ओलीले आफूलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि नै उनी असन्तुष्ट थिए।
निकटस्थहरूका अनुसार पाँच महिनामै ओलीले आफूलाई अपमानजनक तरिकाले मन्त्रीबाट हटाएको असन्तोष आलेलाई छ। त्यही भएर उनी पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता नेपालसँग नजिकिएका थिए।
स्रोतहरूका अनुसार नेपालसहितका एमाले सांसदहरूको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि आले उनलाई भेट्न बुढानिलकण्ठ नै पुगेका थिए। यद्यपी उनले यो कुरा स्वीकारेका छैनन्।
उनले ओलीको साथ छोड्नको अर्को कारण एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि हुन्। आले र रावल सुदूरपश्चिमका छिमेकी जिल्ला अछाम र डोटीका हुन्। तर उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर छैन। २०७४ को चुनावमा रावलले उनलाई टिकट दिन आनाकानी गरेपछि आलेले ओली निवास बालकोटमा गएर टिकट सुनिश्चित गरेका थिए।
पछिल्लो समय देउवा सरकार र एमाले एकताबारे रावल वरिष्ठ नेता नेपालसँगै एक मत हुन नसकेपछि आले नेपालसँग नजिकिएका थिए।
‘पछिल्लो समय उहाँ धेरै चोटी कोटेश्वर जानुभयो। नेपालसँग उहाँको हिमचिम निकै बढेको थियो। रावल नेपालसँग टाढिएकाले पनि उहाँलाई सजिलो भयो,’ एक सांसदले भने।
आलेजस्तै ओली सरकारका बेला चर्चामा आएका अर्का सांसद हुन्- किसान श्रेष्ठ।
गत चुनावमा तनहुँ-१ मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सांसद चुनिएका श्रेष्ठ व्यापारी हुन्। दमौलीमा उनको किसान हार्डवेयर चर्चित छ। त्योबाहेक ग्यास उद्योग र होटल क्षेत्रमा पनि उनको लगानी छ।
२०७७ वैशाखमा सांसद श्रेष्ठ जनकपुर गएका थिए। ओलीनिकट अर्का एमाले सांसद महेश बस्नेत र नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालसहितको उनीहरूको टोलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको थियो।
कोरोनाभाइरसको पहिलो लहर रोक्न भइरहेको लकडाउनबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुने गरी उनीहरूले जनकपुर पुगेर अर्को पार्टीका सांसदलाई काठमाडौं ल्याएका थिए।
त्यसपछि पनि सांसद श्रेष्ठ निरन्तर ओलीको पक्षमा लागिरहे। पुस र जेठमा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि उनी ओलीतिरै थिए।
आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा भने उनी नेता माधवकुमार नेपालसँग पक्षमा मतदान गर्ने हलतिर गए। पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत देउवालाई विश्वासको मत दिए।
सांसद श्रेष्ठलाई पनि सोमबार बिहान हामीले ‘ओलीलाई किन छोड्नुभयो? भनेर सोध्यौं।
उनले संसद जोगाउनका लागि आफूले विश्वासको मत दिएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। सर्वोच्चको फैसलाको सम्मानका लागि पनि संसद जोगाउनु पर्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने,‘मलाई तनहुँका जनताले पाँच वर्षका लागि सांसद जिताएर पठाएका हुन्। स्थायी सांसद र स्थायी सरकार भनेर पठाएका हुन्। जनताको मतको अवमूल्यन गर्न सकिनँ। मैले कांग्रेसलाई मत हालेको होइन, संसद जोगाउनलाई भोट हालेको हो।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८, ०२:५०:००